E nwere nanị ole na ole egwuregwu egwuregwu na bụ dị ka elu-profaịlụ dị ka NBA All-Star Game. Best mara dị ka ihe ngosi nke 24 nke kasị mma basketball egwuregwu na mbara ala, egwuregwu ọ bụghị naanị na-adọta ndị onye bụ onye na-nke basketball ụwa, ma ụfọdụ n'ime nnukwu aha egwuregwu, azụmahịa, na na ntụrụndụ. Ezie na e nwere ụdị nile nke ụzọ iji nweta n'ime egwuregwu, chartering a onwe ugboelu bụ ma eleghị anya ụzọ kasị mma na-eme ya. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị mere i kwesịrị irenti a onwe ugboelu na NBA All-Star Game.
Ọ bụ ihe ndị kasị ụzọ na-e. Speed ​​bụ ikekwe nnukwu uru i nwere ike inwe mgbe ejegharị ejegharị na-eji a onwe ugboelu. The ugboelu bụ budata ngwa ngwa karịa ndị ọzọ ụdịdị nke njem dị otú ahụ dị ka ụgbọala, ụgbọ mmiri, yachts, na ọtụtụ onwe ụgbọ elu. N'ezie, ị nwere ike mezue ugboelu flights n'ime USA na a okwu nke awa. Ị ga-azọpụta a ton nke awa ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-n'akwụkwọ iwu a onwe ugboelu, ahapụ gị na oge na-enwe ihe ọ bụla ọzọ na All-Star Weekend nwere na-enye.
Ị nwere ike mee ka gị na ezinụlọ gị na ndị enyi gị. Mgbe ị nwere ike mgbe niile na-eme njem naanị, otu n'ime ndị kasị uru nke na-agba a onwe ugboelu nke egwuregwu bụ na ị na-eme ka onye ọ bụla maka ride. Na onye ọ bụla n'ụgbọ, ị na-n'aka nwere ihe ịrịba oge mgbe ejegharị ejegharị. Ị pụrụ ọbụna nwere onwe gị onwe party mgbe ị na-ọtụtụ puku ụkwụ nke elu-igwe.
Ọ na-enyere gị Dodge ọdụ queues. Airport queues bụ otu n'ime nuisances mkpa ka ị na-atachi obi mgbe ị na-ejegharị ejegharị site ikuku. Ezie na ndị a queues ndị dị mkpa maka a dịgasị iche iche nke ihe ndị mere, karịsịa maka nchekwa gị, ha pụrụ nnọọ bothersome. Nọkwa a onwe ugboelu eme ka njem a ikuku - na ị na-chebere si lining elu n'ihi na dị nnọọ banyere ihe ọ bụla. All ị chọrọ ime bụ na-egosi na gị na ụgbọ elu, ime na nche ogbugba ndu, na unu ga-na ụzọ gị.
Ọ-enye gị ohere ịga na style. Chartering a onwe ugboelu bụ ma eleghị anya kwesịrị-ejegharị ejegharị na style. Ka emechara, bụghị onye ọ bụla na-akawanye njem eji a onwe ugboelu! Otú ọ dị, n'ofè ụmụ ụmụ, ejegharị ejegharị via onwe ugboelu dị nnọọ classy. Na mgbakwunye, irenti jets na-na-n'ụzọ zuru ezu kwajuru na atụmatụ na eji enyere ndụ aka ga-eme ka ị na-eche dị ka ị na-na na uru a nde dollar. Ọ na-enye gị larịị nke ahụmahụ na-na a họrọ ole na ole na otu na-na-etu ọnụ banyere. Njem na style n'ụgbọ a onwe ugboelu.
Ọ na-enye elu na mma. Nọkwa a onwe ugboelu kwupụta gị ebe bụ a nnọọ adaba ụzọ si ebe A na-ezo B. Ị na-na-abata na ụdị na ma na oge ma ọ bụ tupu-atụ anya. Ị na-na-na zere ụfọdụ n'ime manụ Filiks mkpa ka ị na-aga site na ọdụ. Ị na-na-nnọọ ala oche na ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka ị ga-esi na a azụmahịa ụgbọ elu. Ị pụrụ ọbụna ga-tinyere ihe ndị na-amasị gị na ndị dị otú ahụ dị ka uwe gị, gị ngwá, na ọbụna gị oke oriri na ọṅụṅụ.
Ọ bụ ihe na-i mere ya. Abịa na omume dị ka nnukwu dị ka ndị NBA All-Star Game bụ ugbua iheoma, a akara na i mere ka ọ na ndụ. Otú ọ dị, i nwere ike iwere ihe ọzọ notch site na-abịa n'ime ebe mgbakọ nke egwuregwu mgbe nọkwa a kwụrụ ụgwọ onwe ugboelu! Ọ bụ ihe na ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike na-enweta ndụ ha na ha. N'ezie, ọ ga-eme ka ị na-anya dị ka ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị Player onwe ha! Ọ dịghị ihe na olu "Emewo m ka ọ!"Dị ka abịa All-Star Game via a n'akwụkwọ iwu onwe ugboelu.
Inwe a tiketi na NBA All-Star Game bụ ohere nke a ndụ. Ọ bụrụ na ị nwere nke a ohere, i nwere ike dị ka nke ọma na-aga nile na-na na-enye onwe gị na nke kacha mma ahụmahụ na gị ego gị nwere ike imeli. Chartering a onwe ugboelu na NBA All-Star Game bụ ụzọ kasị mma na-eme njem dị ka a Superstar, ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị otu kacha mma basketball egwuregwu na ụwa.